Healt — Steemit
goldbloger4 (38)in #esteem •4years ago
လိင်ကုထုံးအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေ 30 နှစ်အထိပြီးနောက်, ဒဏ္ဍာရီဒေါက်တာရုသသည်သူမ၏ဉာဏ်ပညာကိုမျှဝေပြုမိသည်မဟုတ်။ ဤတွင်သူမလိင်ဆက်ဆံရေးနှင့်အသက်ပေါ်တွင်သင်၏အဆိုးဝါးဆုံးမေးခွန်းများကိုဖွကွေား။ [email protected] မှသင့်ကိုယ်ပိုင်မေးမြန်းချက် Email ဒါမှမဟုတ်မေးပါဒေါက်တာရုသသည်စီးရီး၏ယခင်အရစ်ကျပေါ်တက်ဖမ်း။ မေး: ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ငါ့ကိုအပေါ်
လိမ်လည်လှည့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်မည်သို့ဆက်ဆံရေးအတွက်ယုံကြည်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်သလဲ? တစ်ဦးက: သင်ပြုရမည်ပထမဦးဆုံးအရာ "? ငါသည်ငါ၏အဖော်နှင့်အတူနေထိုင်ချင်ပါနဲ့" ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးခွန်းမေးဖို့သငျသညျအဖြေနှင့်ပတ်သက်ပြီးချီတုံချတုံနေလျှင်, ဒါဟာယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အလွန်ခက်ခဲဖြစ်သွားသည်။ ဒါဟာနေပါစေအဘယ်အရာကိုခက်ခဲလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကစိတ်ထဲမှာ၏ညာဘက်ဘောင်ထဲမှာမနေလျှင်, မဖြစ်နိုင်ပေမည်။ သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဝတ်အချည်းစည်းတွေ့မြင်အခါတိုင်းသင်သည်သူသို့မဟုတ်သူမကြောင့်အခြားသူသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူအဝတ်အချည်းစည်းခဲ့သည်ထင်လျှင်, သင်မည်သို့ အစဉ်အဆက်ကိုထပ်သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့သွားမည်နည်း သငျသညျဖြစ်ကောင်းထိုသို့သောအတှေးအထင်မသင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ် willpower အများကြီးယူမယ့်ရဲ့မရနိုငျသောကွောငျ့, သငျဆကျဆံရေးချွေတာဖို့သန္နိဋ္ဌာန်တွေဟာမဟုတ်လျှင်သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုထုတ်ထိုကဲ့သို့သောအတှေးအတွန်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ သငျသညျရိုးရိုးသားသား, ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်သမျှ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှပြောနိုင်ပေမယ့်ငါကျွန်တော်တို့ကိုအတူတူနေဖို့လိုလျှင်, ထို့နောက်သူကအများကြီးပိုပြီးလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ အတူတူတည်းခိုသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, သင်တိုင်းနှောင်းပိုင်းတွင်ညဥ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေး hanky-panky တစ်ခုအမှန်တကယ်အစည်းအဝေးသို့မဟုတ်သက်သေအထောက်အထားရှိမရှိအံ့သြထံမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် profusely တောင်းပန်ကြောင့်နောက်တဖန်အဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှကတိပြုထားသည်ယူဆရင်, သူသို့မဟုတ်သူမပွုနိုငျတခြားဘာမှမရှိဘူးပါပဲ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူသို့မဟုတ်သူမ၏ဘဝနှင့်အတူပေါ်ရဖို့ရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာ leash ပေါ်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုလျှင်, ဆက်ဆံရေးဟာကြာရှည်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သော့ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းကိုအတွင်းပိုင်းကယ့်ကိုပါပဲ။ သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ဆန္ဒရှိနေလျှင်, သင်လုပ်နိုင်သည်။ သငျသညျသံသယရှိပါကဒါပေမယ့်ထို့နောက်ငါသည်သင်တို့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်သည်ဟုသံသယနှင့်သင်တို့အပေါ်မှာရွှေ့အကြံပြု
liin kuhtone aahpyit aalotelotenay 30 nhaitaahti pyeenout, dandarre douttar ru s sai suumeat nyarn panyar ko myahaway pyu mi sai mahote . itwin suu m liinsaatsan rayy nhaint aasaat pawtwin saineat aasoewarrsone mayyhkwannmyarrko hpw kwayarr . [email protected] mha saint kopinemayymyanhkyet Email darmhamahote mayy par douttar ru s sai hceeree eat yahkain aaraitkya paw taat hpam . mayy: ngar lotehpawkinehpaat ngarko aapaw lainlai lha ny pyeenout kyawanote maishoet saatsanrayy aatwat yonekyimhu pyanlai taisout salell? tait u k: sain pyu ramai pahtam u sone aarar "? ngarsai ngareat aahpaw nhaint aatuu nayhtine hkyin par nae" koy ko ko mayyhkwann mayyhphoet s ngya s nyyaahpyay nhaint paatsaatpyee hkyae tone hkya tone nay shin, darhar yonekyimhuko pyanlai taisoutraan aalwan hkaathkell hpyitswarrsai . darhar nayparhcayabhaalaarar ko hkaathkell lain maal, darpaymaae sain k hcatehtellmhar eat nyarbhaat bhaung htellmhar m nay shin, mahpyitnine pay mai . sainsai saineat lotehpawkinehpaat aawaatahkyaee hcaee twaemyin aahkartine sainsai suu shoetmahote suu m kyount aahkyarr suu shoetmahote aamyoesamee tait u nhaint aatuu aawaatahkyaee hcaee hkaesai htain shin, sain maishoetahcainasaat ko htaut saint rae laattwalhpaw yonekyi hcatehkya hphoet swarrmainaee s ngya s nyya hpyitkaungg htoshoetsawathaayyahtain m saint rae aahcateaapine taithkuaapaw willpower aamyarrkyee yuu m ae rae m r nongya saw kwayarngya, s ngya sakyasanrayy hkyaway tar hphoet sannithtaran twayhar mahoteshin sainsai saineat hcate ko htote htokaeshoetsawathaayyatwann nine lim mai mahote . s ngya s nyya roeroesarrsarr, hpyitpyet hpyitpyet samyaha, koy ko ko mha pyawwnine paymaae ngar kyawantawthoet ko aatuutuu nayhphoet lo shin, hthoetnout suu k aamyarrkyee popyee lwalkuu par lain mai . aatuutuu taeehko saint rae raimhaannhkyet hpyitpartaal shin, sain tine nhaawinnpine twin ny in hceepwarrrayylotengaannaahcaeeaawayy hanky-panky taithku aamhaantakaal aahcaeeaawayy shoetmahote saatsay aahtoutaahtarr shimashi aan sya htanmha koy ko ko ko rautt ant par lain maal . saint raelotehpawkinehpaat profusely taunggpaan kyount nout tahpaanahpyitpyet bhaaltotmha katipyu htarrsai yuusarain, suu shoetmahote suu m pwu nongya tahkyarr bharmhamashibhuu parpell . i puggol ko suu shoetmahote suumeat bhaw nhaint aatuu paw rahphoet shipartaal . sain tait utainnkyauthcwar leash paw suuthoetko hcawng shout hkyinn aapaw aapyinnaahtaan taunggso shin, saatsanrayy har kyaarshi bhaaltotmha par lain maal . dar kyount sot ko saint kopine hkaunggko aatwinpine k ae ko parpell . sainsai saineat lotehpawkinehpaat yonekyi hcatehkya hphoet sandashi nay shin, sain loteninesai . s ngya s nyya sansayashi par k darpaymaae hthoetnout ngarsai sainthoet aaungmyin par lain maal saihu sansay nhaint sainthoet aapawmhar shwae aakyaanpyu
#good-karma #life #new #time
4 years ago in #esteem by goldbloger4 (38)